Jumpsuit maka ndị mbido, Nkebi 1 | Site na Linux
Ugboko92 | | Mmemme
Mgbe m malitere ịmụ C #, ekpebiri m ịmalite usoro a dị mkpirikpi, iji nwee ike ịkụzi n'ụzọ bụ isi, otu esi eji C # na mono na Linux.
Ebumnuche bụ inye ihe ọmụma bụ isi na n'ikpeazụ na nke kachasị ọhụrụ, iji nwee ike ịnye echiche nke etu esi etinye mono, ma GTK # na Qt 4 qyoto.
1 Ajụjụ mbụ ụfọdụ ga - ajụ bụ: Gịnị bụ Mono?
2 Kedu ihe anyị nwere ike iji Mono mee?
Ajụjụ mbụ ụfọdụ ga - ajụ bụ: Gịnị bụ Mono?
Mono bụ ikpo okwu emere iji kwado ndị mmepe, ihe okike nke ngwa cross-platform, nke ọrụ Xamarin na-akwado.
Ọ bụ ntinye ọrụ nke Microsoft.NET, dabere na ụkpụrụ ECMA maka C # na CLR (igwe na-arụ ọrụ na koodu ahụ, onye na-ekpofu ahịhịa, na onye na-ahụ maka akụ).
Mono na-enye ohere ịmepụta ngwa maka Linux, Windows, Osx, iOS, Android, Windows Phone wdg…, na mgbakwunye na inwe ike iji Windows msdị na Windows, Gtk na Qt na Linux, Cocoa na Osx dị ka interface.
Mono na-enye ohere ijikọ C #, Visual Basic, Java, Python, Ruby, Eiffel, F # na asụsụ ndị ọzọ, n'otu mmemme ahụ. Ihe ichotara C # nwere ikike n’okpuru MIT / X11 na GPL. Ngwaọrụ dị n'okpuru ikikere GPL, oge ọrụ, n'okpuru LGPL 2.0, ọba akwụkwọ dị n'okpuru MIT X11, na ASP.NET, MEF, DLR, AJX, n'okpuru ikikere ikike ikike Microsoft na APACHE2.
Matakwu banyere patent ma mee ka o dokwuo anya n'ihi na enweghị ezigbo ihe egwu, m na-ezo aka na otu weebụsaịtị nke mono. http://www.mono-project.com/License
Kedu ihe anyị nwere ike iji Mono mee?
Anyị nwere ike ịmepụta site na ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa, na ọdụ data ejikọrọ na Mysql, Postgresql wdg ..., na ibe weebụ.
Anyị nwere ugbu a Mmepe , otu n'ime IDE zuru oke na Linux, nke na-arụ ọrụ na Linux, Windows na Mac OSX.
Ọ na-enye ohere ịdee ọtụtụ asụsụ, gụnyere C #, Visual basic.net, C / C ++ na Vala.
N'okwu a, aga m akụzi otu esi etinye ụdị nke kachasị ọhụrụ na Ubuntu na nkwekọrịta, na distros ndị ọzọ, dịka Opensuse ma ọ bụ Archlinux, anyị ga-ahụ nsụgharị kachasị ọhụrụ na ebe nchekwa gọọmentị.
Nke mbụ, anyị ga-agbakwunye repository
Mgbe ahụ, anyị ga-emelite ma wụnye gburugburu na ọba akwụkwọ
Ozugbo arụnyere ihe niile, anyị ga-amalitegharịa usoro ahụ.
IDE, MBIR MBU
Anyị ga-emeghe Monodevelop, mgbe NchNhr »Njikwa» Ihe ọhụrụ »Ngwọta na igbe okwu ga-emepe, nke a kpọrọ azịza ọhụụ dịka nke a:
Anyị ga-enye ac #, ọrụ njikwa, anyị ga-abanyekwa aha ọrụ ahụ ma anyị ga-enye ya ọnọdụ na n'ikpeazụ anyị ga-enye ya ka ịnabata, ma si otú a kpochapụwo ụwa ochie na-ewu ewu Hello World.
N'ime usoro ihe omume mbụ a, anyị ga-ahụ isi ihe abụọ:
1: Isi Isi ọrụ, nke bụ iwu ka e nwee mmemme ọ bụla, ebe onye ntụgharị okwu ga-achọ akụkụ ahụ, ịmalite ime ya. N’okwu a, anyị dị iche n’asụsụ ndị ọzọ karịa okwu echekwara Isi, Ọ na - ebido na mkpụrụedemede ukwu ma anyị enweghị ike ihie ụzọ ebe ọ bụ na, ma ọ bụghị, mmemme ahụ agaghị arụ ọrụ.
2: Iwu Console.WriteLine ();
Iwu a nyere anyị ohere igosipụta ederede na ihuenyo. Console.WriteLine, bụ n'ime namespace "System", n'ihi ya, dị ka ị pụrụ ịhụ, na mmalite nke usoro ihe omume iwu "iji System" a gụnyere.
Console.WriteLine, na-enye anyị ohere igosipụta ederede, na-etinye ya n'etiti etiti abụọ, ma ọ bụ mgbanwe, na-etinye ha na-enweghị nkwupute.
N'ikpeazụ, anyị ga-eme ihe omume ahụ, na-akụ igodo F5.
Na C #, anyị nwere ụdị mgbanwe dị iche iche n’etiti ha:
Int maka onu ogugu dum, ise n'elu maka onu ogugu na decimals,abụọ maka onu ogugu nwere onu ogugu ma o bu nkenke abuo, nkwupùta maka odide, eriri maka eriri ederede, boolụ maka "Eziokwu" ma obu "ugha" na ọnụ ọgụgụ . (Enwekwara ụdị ndị ọzọ, mana ugbu a ọ dịghị mkpa ịmara ha niile, anyị na-edozi maka ndị bụ isi).
A na-ekwupụta ọdịiche dị ka ndị a:
Na ndị ọzọ okwu: typeVariable variableName = data;
Maka ozi ọzọ banyere ụdị m na-ahapụ ndị na-esonụ njikọ: http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms228360%28v=vs.90%29.aspx
Mbipụta dịgasị iche iche na nkịtị
Nke mbụ anyị na-ekwupụta ihe na-agbanwe agbanwe n'ime ọrụ MAIN, dịka ọmụmaatụ:
int costOfPrice = 14; int VAT = 6; int sumTotal = VAT + ọnụahịa; Console.WriteLine (sumTotal);
M hapụrụ gị ijide.
Nsonaazụ nke gburu na ngbanwe ngụkọta, ngụkọta nke ọnụahịa agbanweOfCoste na Iva na-agbanwe agbanwe ga-apụta na ihuenyo ahụ.
Anyi nwere uzo abuo anyi si ekwu, nke mbu bu uzo kpochapuru, nke okwu nke uzo ma eme ya n'uzo di otua:
Edebere ya tupu ederede ahụ, Ogwe abụọ: // Nke a bụ nkọwa otu-akara
A na-ekwu ọtụtụ okwu dị ka ndị a:
Edere ederede tupu: "/ *" wee kwụsị na "* /"
Ọfọn, m na-ahapụ akụkụ mbụ a ebe a, izu na-esote, m ga-anwa ịkọwa nke ọma banyere ojiji nke mgbanwe, m ga-ewebata ọ bụrụ, mgbe na maka nkwupụta, m ga-akọwa n'elu ihe ihe, klaasị na ọrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Mmemme » Jumpsuit maka ndị mbido, Akụkụ 1
Ihe 68 kwuru, hapụ nke gị
Enweela m ngwa ngwa dị mfe na C # na mono, otu n'ime ihe mere m ji gbanwee (ọ bụ na m kpọrọ Gtk asị, na ike m niile), ọ dịghị ihe dịka QT, na ihe ọzọ bụ na eke yiri ka asụsụ ka nnọọ mma, nke na-enyekwa nnweta nnweta dị mfe n’etiti nyiwe.
E wezụga nke a, m ga-ekweta na MonoDevelop bụ otu n'ime echiche kachasị mma na ụwa nnwere onwe, naanị QTCreator karịrị na ụzọ m si ahụ ihe na-ewe ọtụtụ n'ihu, ekwere m na c ++ maka m bụ isi ọwụwa.
Ọ bụ ezie na ugbu a anyị nwere ụdị Pycharm Comunnity Edition, (nke ọ bụ ezie na ọ bụghị emeghe ka ọ bụ n'efu, dịka ọmarịcha) maka eke na eziokwu dị ezigbo mma "Python + Pychar + QtDesigner" ma ọ bụ "Sublime + Pycharm + QtDesigner" dị mfe karịa rụọ ọrụ na karịa na MonoDevelop. Tohapụ ikwu na Django, Web2Py, dị mma karịa ịrụ ọrụ na mono akụkụ weebụ.
Ihe m na-ekwu bụ na ọ dị m ka ọ bụ ezigbo echiche nye m ma ọ bụrụ na onye na-eme ihe nkiri na Visual Studio. Net chọrọ ịkwaga na ndị ọzọ nwere onwe ha na Mono dị mma, mana ọ bụrụ na onye na-ahụ maka ngwanrọ na-akwụ ụgwọ n'efu na-amụ ihe mmemme n'oge a, gịnị kpatara na jiri nyiwe kpamkpam? enwere na mbido dị ka C ++ ma ọ bụ Eke Ọgba never Kedu nke anaghị aga n'ụdị ma bụrụkwa nke na - ewu ewu kwa ụbọchị.
Ugbu a, a na-anabata nkuzi ọ bụla maka mmemme, a na-anabatakwa onye mmemme ọ bụla nke na-eche inyere ndị obodo aka na Mono, ma ọ bụ n'asụsụ ọ bụla.
M ga-agbanwe Pycharm maka Ninja-IDE
Ọ masịrị m + Pycharm Ninja Ide ka na-efu, maka ninja ide, Achọrọ m ịdị elu.
Ihe gbasara Pycharm bụ na mbipute n'efu bụ otu ihe ahụ dịka Ninja IDE: /
Pycharm autocompletion dị oke mma, koodu refactor kwa, njikọta git dị mma. Ihe atọ ndị a enweghị m ike ịchọta na Ninja-Ide ma ọ bụ na plugins.
Megide PyCharm na-eji "JAVA", ọ dịkwa arọ, mana chi jiri n'ehihie na-ejikwa ya ma ị hụ otu esi eji ya.
Ugbu a, ahụrụ m ọdịnihu maka Ninja-Ide mana ọ nweghị ọtụtụ atụmatụ iji tinye. Ọ bụ ụzọ m si ahụ ihe
Nwere ike iji mono C # na qt n'enweghị nsogbu, na-eji qyoto, ahapụrụ m njikọ na post.
Ee amaara m, dịka m kwuru na anaghị m emegide Mono, ọbụlagodi C # dị ka asụsụ dị mfe mmụta. Enweela m otu nkuzi ma ọ bụ abụọ akwadoro, mana dịka m kwuru na enwere teknụzụ na-akwụghị ụgwọ maka onye na-amalite na ya, ha anaghị achọ usoro ọ bụla akọwapụtara.
Ana m agbachitere eke, ọtụtụ, mana m na-eme ọkwa mbụ nke Oracle Java Develop SE certification, naanị n'ihi na enwere m ihe m ga-agbakwunye na usoro ọmụmụ m, yana n'ihi na ndị na-achọ Java "oge ụfọdụ" dị mma na Venezuela. Ọ bụ ezie na afọ gara aga ndị DJango amụbawo nke ukwuu, enwere m olileanya na otu ụbọchị ịrara onwe m nye na mmemme.
PS: Admas de Qyoto bụkwa Qt4Dotnet maka c #
PS: Dobe njikọ ndị ahụ na microsoft MSDS. Nke a bụ akwụkwọ maka mono: http://docs.go-mono.com/ haha.
Mana ha no na Bekee xd
Mono: Mpempe akwụkwọ Microchot na nyiwe efu.
Ọfọn, ọ bụrụ na omenala ahụ ka dị, anyị nwere ike ịbọ ọbọ EEE, na C # nwere ike ịbụ n'efu.
Ọ dịghị mma ma enwere m ike ikwenye gị na nke ahụ, mana mgbe ị gbalịrị, dịka ọmụmaatụ, mepụta mmemme na-arụ ọrụ na nyiwe niile ma jiri asụsụ a maara nke ọma, ọ bụghị nhọrọ ọjọọ.
Matesmụ klas m bụ ndị nzuzu Java freaks na ha achọghị ile anya n'akụkụ, mgbe ahụ ha chọtara C # ma ugbu a ha hụrụ C # n'anya ma na-ekwu okwu pesti nke Python dịka ọmụmaatụ.
Mono bu uzo esi aru oru n'otu ihe omuma site na nyiwe di iche iche, achoputara m onwe m ebe obu na echiche a di uku ma o na aru oru, mana odighi acho C #
N'agbanyeghị ole ha na-eyi silk enwe, ma ọ bụ enwe na nke a, ọ bụ ka Microsoft n'ókèala, mepụtara na nke mbụ atụ ka ụgbọ mmiri na .NET kpuchie na GNU + Linux.
Mono ọ dị mkpa n'ezie iji zụlite ngwa cross-platform?
Azịza ya doro anya ma dị ike: Mba.
Ọ dịghị mkpa n'ihi na ụdị ngwa Mono [b] bụ ebughi chicha ma ọ bụ lemonade [/ b]: ọsọ ọsọ nke C Shit, m na-ekwu Sharp, karịa Python, bara uru naanị mgbe ị na-eji ngwa dị mgbagwoju anya ma mee kpụ ọkụ n'ọnụ eji ihe ndị dị n'ime obodo dịka HW na sistemụ arụmọrụ. Maka * kpamkpam ihe ọ bụla ọzọ, e nwere Python + Qt ma ọ bụ, ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka ngwa azụmahịa, ụjọ ọzọ CamelCase kpọrọ Java.
Yabụ, ọ bụrụ na anyị chọrọ ngwa mpaghara dị mgbagwoju anya iji rụọ ọrụ nke ọma na nyiwe dị iche iche, naanị nhọrọ nwere ike ịbe bụ itinye mmemme kwuru ngwa na-eburu n'uche njirimara nke gburugburu ebe ọ ga-agba ma jiri C ++.
Gụrụ akwụkwọ ikike Mono? Ọ bụghị naanị mkpesa Microsoft (nke m kwupụtara, amaara m ihe ụlọ ọrụ shitty ọ bụ na enwere m ihe kpatara m ji alụ ọgụ ya) mana ka m dabere n'okpuru atumatu aka ike ya.
Can nwere ike ịdekọ ngwa niile ị nwere ike iche na PythonQt ka ha wee ọ bụghị naanị ịba ụba kamakwa ọbụna ngwakọ mpaghara / ígwé ojii nwere otu arụmọrụ kama ọ ka mma karịa ndị ọzọ.
Ugbu a mgbe usoro nhazi ọ bụla gụrụ naanị ndị ọzọ bụ C / C ++.
Nyochaa ya Nano: ọ bụrụ na NET n'ike mmụọ nsọ na Mono bụ ihe ha na-akpọsa ma taa ihe niile ga-emepe n'ụzọ ahụ, ihe niile: ihe nchọgharị weebụ, ndị na-egwu egwu, akwụkwọ ntanetị, ndị editọ onyonyo, ihe ọ bụla ịchọrọ, n'eziokwu, ị ga-eji ihe niile kpochie ubu otu ugboro na ị ga-n'ọdụ ụgbọ mmiri ya na di ntakiri mgbanwe ọ bụla n'elu ikpo okwu, nri!? Heh, lee ka o si bụrụ ihe ijuanya na ọ naghị eme ọzọ ..>: D.
Ekwela ka agwọ nke na-ere enyo nwere agba (eriri 'multiplatform' bụ otu n'ime ha).
Abụ m nke osisi PHP na Python enwere m ndapụta m, omume karịa nke ndabere, mana Python taa na-enye ohere ịdepụta ma mpaghara, site na ngwa njikwa, site na ngwa desktọọpụ siri ike na weebụsaịtị zuru ezu, CRM ma ọ bụ ngwa weebụ ahụ ị chere. Ọ bụ eziokwu a na-ahụ anya, Mono bụ anwụrụ ọkụ nke na-ere ogologo oge ma na-ejedebeghị na obodo niche.
Ọ bụrụ na e nwere ihe e ji mara F / LOSS, ọ bụ sagacity nke ndị mmepe ndị ị na-agaghị ere ihe ọ bụla na-enweghị isi site na iji naanị okwu dị mma - ana m ahapụ nke ahụ maka 'ndị mmepe' na-eji teknụzụ Microsoft '-, ọ bụrụ na bụ n'ezie ihe ịtụnanya ọ na-azọrọ na ọ ga-abụrịrị onye a nabatara n'ọtụtụ ụdị ọrụ 'multiplatform'.
Ozo, ihe uto 'obe-ikpo okwu' dika ihe eji eme ihe na mpaghara bu ugha, ezi echiche nke obe bu na web.
Ọ bụrụ na Mono bụ ihe ọ na-azọrọ ịbụ, gịnị kpatara na ị gaghị ewepụta nnukwu ngwa na egwuregwu na C # iji wee jiri uru okpukpu atọ karịa ọnụahịa ahịa karịa otu ikpo okwu?
Enwe? Mba, daalụ, ya rịa elu osisi o siri na ya da.
Nke mbu, a na-ejikarị C # eme ihe karịa eke n'ụwa niile, n'agbanyeghị na ọ pere mpe
Nke abuo, ahapụrụ m njikọ ahụ na ikikere ndị dị n'elu wee kọwaa n'ụzọ doro anya, yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbachi ọnụ ụzọ megide ihe edere, gaa n'ihu ...
Java bụ crappy na okwu nke arụmọrụ na bụ nke abụọ kasị eji asụsụ, gị echiche adịghị eme ka uche. Ọ dị ka m na-ekwu "Ọ B IFR Linux na Linux dị mma dị ka ha na-ekwu, ọ ga-eji 90% nke ndị ọrụ desktọọpụ, mana ụzọ 1/2% na-eji ya, ọ na-amịrị."
N'ikpeazụ, ọtụtụ ndị mmepe anaghị echedị echiche maka ịme ngwa-obe, ma ọ bụrụ na ha mere, ha ga-eme ya na java.
Ọ bụghị ịbụ ụkpụrụ, ma na C "michi" ọ na-agbagwoju m anya. Mma m na-ahọrọ ịrụ ọrụ na Java mastodonted ma ọ bụ C ++ dị ebube (ọ bụ ezie na afọ a, ha kụziiri m C # na Visual Studio nke otu puku ndị mmụọ ọjọọ.
Ndo @ eliotime3000, mana rue ta amaghi m ngwa java maka desktọọpụ nke na arụ ọsịsọ…: /, na c +++, n'ezie ọ ka mma, mana ọ na-esiri m ezigbo ike.
Aghọtara m gị, ebe ọ bụ na iji Java, ahọpụtala m ma ihe ọ rụpụtara bụ ọdachi Banyere C ++, ahụrụ m ya n'anya maka mgbagwoju anya ya na etu ọkụ si arụ ọrụ.
Agbanyeghị, na-arụ ọrụ na nkà na ụzụ site na Microsoft, ọkachasị ọ bụrụ na ị na-eji Visual Studio .NET.
1) Ahụrụ m akaụntụ gị na Phoronix
2) Tiobe enweghi ike iji ya mee ntughari.
3) Tiboe ka ọ bụ TIOBE?!
Amalitere m ịza gị otu a:
«Nke mbụ, a na-eji C # eme ihe karịa Python n’ụwa niile, ọ bụ ezie na ọ pere mpe
Ọ bụ ihe ezi uche dị na ya iche na Eke Ọgba na-eji ya eme ihe n'oge dị mkpirikpi na M $ nọ na-agbagharị ruo oge ụfọdụ.
«Nke abụọ, ahapụrụ m njikọ ahụ na ikikere ndị dị n'elu ma kọwaa n'ụzọ doro anya, yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbanye ọnụ ụzọ megide ihe edere, gaa n'ihu ...»
Fanboy gị na Micro $ oft enweghị oke, ọ bụ?
Mono (nsụgharị 1.1.10) bụ otu n'ime ngwungwu ngwanrọ nke ndị otu OIN na-ekwe nkwa ịghara iji ikike nchọpụta ikike ha mee ihe.  1.1.10.dị 2005 sitere na XNUMX.
Na Nọvemba 2010, Microsoft zụtara 882 patenti sitere na Novell (dị ka obere akụkụ nke ọrịre buru ibu nke Attachmate zụrụ ọtụtụ Novell). Nke a nwere ike belata OIN. (You nwere ike inye aka? Amaghị nsonaazụ nke a. Ozi a nabatara ebe a: Novell # Ndi_this_weaken_OIN.3F) »
Ọ bụ ezie na mgbe ahụ ọ bụ eziokwu na otu paragraf ahụ gwụsịrị:
«Ma eleghị anya, Microsoft enwetaghị ikike ọ bụla nke ga-adị ize ndụ nye ndị ọrụ Mono. Izizi, Microsoft enweela ikikere ndị ọzọ, yabụ ọ bụrụ na Novell nwere nke ọ bụla, nke a ga-abụ oke. Nke abuo, o yiri ka nkwa patent nke Microsoft ga-etinye aka na patent ọhụrụ enwetara. N'ihi ebumnuche abụọ a, ikike nchọpụta ọhụụ enwetara naanị dị oke egwu dị ka ikike nchọpụta nke Microsoft nweburu, yabụ na ha pere nnọọ mpe. »
O doro anya ma ihe ọhụrụ .NET _SI_ ga - eme ka patịn ga - eme n'ọdịnihu n'ọdịnihu n'ụzọ ga - eme ka ndị mmepe C # rụọ ọrụ nke ọma site na bọọlụ.
Ọ bụ usoro dị mfe -deiabolic- nke gosipụtara na-enyere aka.
Ọbụghị naanị nke ahụ, dịka akụkọ wikipedia banyere Silverlight / Moonlight na-ekwu:
«A na-etinye usoro mmeghe nke Silverlight, nke a na-akpọ Moonlight kemgbe Mono 1.9.  Ọnwa Ọhụrụ 1.0, nke na-akwado Silverlight 1.0 API, ewepụtara ya na Jenụwarị 20, 2009. Moonlight 2.0 na-akwado Silverlight 2.0 yana ụfọdụ atụmatụ nke Silverlight 3.0.  A mara ọkwa mbupute preview nke Moonlight 3.0 na Febrụwarị 2010 wee nwee mmelite na nkwado Silverlight 3. 
A gbahapụrụ ọrụ Moonlight na Mee 29, 2012.  Dabere na Miguel, ihe abụọ mere ka akara aka nke ọrụ a: Microsoft gbakwunyere «mgbochi mgbochi» na «… mere ka ọ ghara ịba uru maka mmemme desktọọpụ…», na teknụzụ enwetabeghị oke traction na weebụ. »
nsogbu nke Micromierda ị hụrụ n'anya bụ na ha nwere ike ịgba bọọdụ ahụ mgbe akpọrọ ha dịka ha mere na Silverlight.
Dabere na atụmatụ nke ọrụ dị ntakịrị dị ka akụkọ ihe mere eme bụ MICROSOFT N'AGH OF OHỌTA ỌROS ỌH DER OP ỌH ISRV ISBỌCH IS B IS TOB IS AKW SHKWỌ AB TWOỌ.
Ka anyị gawa.
«Nchịkọta: Mono na FOSDEM ọkọdọ kagbuo na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụla Mono mkpuchi ụbọchị ndị a»
Kedu ihe bụ itinye ego na ọrụ nwụrụ anwụ ma ọ bụ jiri obere ihe, mmasị dị nta site n'aka ndị mmepe na-enwu enwu n'elu ikpo okwu nke na-esi isi site na mbido ma nwee naanị Ballmer yi uwe dịka onye nwere obi ụtọ na-ama elu ma na-ekwu "Go Mono, Go!"? Kedu onye nzuzu chọrọ nke ahụ!? Ah ee, pandev92, aka nri.
Enwere ike Mongwọ Mono Dịka Ọrụ Microsoft:
«Ummary: Site na ikike nwebisiinka nke Microsoft, ikikere, na ikikere na Mono, yana onye isi ọrụ na-arụ ọrụ maka Microsoft na nkwado ego site n'aka ndị agha Microsoft, ọ bụ ihe nzuzu ịgwọ Mono dịka ihe ọ bụla karịa ịgbatị Microsoft
Ma Mono ma Miguel de Icaza anaghịzi eme akụkọ ahụ. Ikekwe n'ihi ndụ ezinụlọ na-ekwu okwu, ndị nke a na-ahapụkarị ọnọdụ ọha na mgbe ụlọ ọrụ ọhụrụ ya, Xamarin, natara ụfọdụ ego site na VC nke ndị agha Microsoft, ọ dị mma iche na ọdịmma Microsoft / ndị isi ga-eketa ibu ọrụ karịa ọrụ a. Ọ na - enyere openwash .NET ma dị ka ọ bụ obe-ikpo okwu. Moonlight mere otu ihe ahụ maka Silverlight. Dị ka Richard Hillesley si kwuo ya n'izu a, Microsoft na-etinye aka ugbu a. Iji kwuo okwu kọlụm ya: “Microsoft nyere Mono agbamume ụfọdụ na mmata na ọrụ ahụ nyere aka ịgbasa okwu ahụ ma weta ndị mmepe na ngalaba Microsoft. Ọ bụkwa eziokwu na ọtụtụ ndị nọ na Microsoft nwere ezigbo mmasị n'ịkwalite echiche nke 'isi mmalite', na-ejikarị ụdọ agbakwunye, Mono nyekwara nkwenye maka nkwupụta Microsoft na teknụzụ ya dị iche iche, nweta ndị mmepe ngwanrọ n'efu. na 'akụkụ nke web mepere emepe'. »
Kacha ọhụrụ na Debian GNU / Linux Linux na-etinye Gnote mgbe ewepụrụ Mono:
Na nchikota: Mkpebi na-akpali mmasị site n'aka ndị mmepe / ndị ngwungwu Debian, ndị na-enyere ndị jụrụ na ịpụ Mono aka
Ọ bụ ezie na Debian na-etinye GNU + Linux maka ortho, ha ka bụ ndị mmeri nke mgbasa nke sistemụ arụmọrụ zuru ụwa ọnụ na nke ahụ ga-agbachitere ọnwụ.
A dịtụ ngwa na-agba ọsọ Java desktọọpụ ngwa? MuCommander, gaa google ya. Ọ DERY ezigbo ọsọ m ga-asị.
Java bụ crappy na okwu nke arụmọrụ na bụ nke abụọ kasị eji asụsụ, gị echiche adịghị eme ka uche. Ọ dị ka m na-ekwu "Ọ B IFR Linux na Linux dị mma dị ka ha na-ekwu, ọ ga-eji 90% nke ndị ọrụ desktọọpụ, mana otu 1/2% jiri ya bụ ihe nzuzu."
Chọpụta, ikekwe ịgụ akwụkwọ nke abụọ ị ga-aghọta ihe m dere, a na m akpọ gị òkù. Ọ bụrụ n’ịnweghi ike ịtụgharị ya, mee ka m mara ma aga m eji ọlyụ kọwaara gị nke ọma.
"N'ikpeazụ, ọtụtụ ndị mmepe anaghị echedị echiche maka ịme ngwa-obe, ma ọ bụrụ na ha mere, ha ga-eme ya na java"
KA ANYA LEE, KA O doo anya: Microshit's MANTRA n'oge iweta .NET na GNU + Linux KWES PRR demonst igosi na mmepe ya (na olu http://goo.gl/hDqLwY) MGBE AH PL.
Yabụ, kedu ihe ị na-ekwu?
Ọ bụrụ na ị hụrụ Microsoft n'anya na nke ahụ na - eme gị obi ụtọ ... na nke ọma, nnabata, ndụ dị mkpụmkpụ, ọ bụrụ na ị na - enwe ... nke ahụ ... nke ọma, ebe ahụ ka ọ bụ, ọ bụ ndụ gị, mana opekata m m pụta na kọlọtọ kama nke ime ka ndị ọzọ gbanwee obi gị.
Nah, ị maara nke ọma na m sitere na Python, na nso nso a ọtụtụ PHP na JS maka ebumnuche ọrụ, nke m bụ mmepe weebụ (karịa yana echiche na API na JS maka arụ ọrụ ọtụtụ ọrụ, ọ na-atụ ụjọ).
Ihe m na-ekwu bụ na, ọ bụrụ na ọ dị oke mkpa iji C #, yana na enweghị m ike ịgọnahụ ya na ndị ọzọ, n'ihi na enwere ike m na-eji mono, mana anaghị m enwe oke enyi nke ikpo okwu ahụ.
Ndewo, ị na-anụ enyi, gịnị ka ị kwadoro dị ka echiche mmemme nke na-eji eke na qt? Ana m echere azịza gị ozugbo.
M na-eji Emacs maka ihe niile ka m wee ghara ịgwa gị, mana ajụjụ ọsọ ọsọ onye ọrụ maara ihe niile na-eweghachi ọtụtụ ihe: http://lmgtfy.com/?q=ide+for+python+and+qt
Dị ezigbo mma, mana ọ bụrụ na ejiri Debian Stable (Wheezy), mmadụ ga-agbakwunye azụ azụ na /etc/apt/sources.list usoro ndị a (ma ọ bụ site na ịdezi faịlụ ahụ na GNU Nano ma ọ bụ iji Isi mmalite Software na / ma ọ bụ yiri ya) >>
Ọ bụrụ na ị na-eji Debian Testing na / ma ọ bụ ejighị n'aka, MonoDebelop adịlarị.
aha aha = "mikasa";
// SNK achọpụtala.
Site n'ụzọ, ọ dị onye ji Vala-C ma ọ bụ granite? (Nke a bụ elementaryOS)
Hahaha i jidere m 😛
hahaha, ee ahurum ya
ELAV nwere mmasị iji mmemme na MONO C #.
ELAV bụ onye na-eso ụzọ kwesịrị ntụkwasị obi nke Miguel De Icaza na ọrụ MONO ya.
I nara m ya n’onu m n’acho, si na nkpisi aka m .. U_U
Ana m ekwupụta na a nwara m ịmụ C #, ebe NET platform na-enye ohere iji asụsụ a na-arụ ọrụ ma ị nwere ike ịmepụta ngwa desktọọpụ nke na-arụ ọrụ na igwe ọ bụla na NET arụnyere, ya bụ, ịmụ asụsụ nke na-enyere m aka ịmepụta mmemme na-agba ọsọ 90% nke kọmputa ndị dị n'ụwa bụ ihe na-adọrọ adọrọ (n'ezie enwere ọtụtụ nsụgharị nke NET na ị ga-ebu ụzọ wụnye ya iji nwee ike iji ya), karịa ịmụta mmemme maka 1% (XD sorry linuxeros ). Java na-adọrọ adọrọ, ebe ọ bụ na ọ na-enye gị ohere ịme ihe ga-arụ ọrụ na 100% nke kọmputa ndị dị na mbara ala (ị ga-etinye Java ma chekwaa ọdịiche dị n'etiti nsụgharị nke Java na akụkụ ndị na-adịghị arụ ọrụ n'otu ọrụ niile) usoro) Nhọrọ kachasị mma dị ka java. Ọ bụ ezie na NET dị ngwa karịa Java, Java ka juru ebe niile. Ọ ka mma ịga Java. Ọzọkwa, MONO abụghị NET, ọ nweghịkwa ihe ọ bụla ga-ekwe nkwa na ọ ga-arụ ọrụ na Windows, ma ọ dịkarịrị obere na ndị ọzọ.
Site na archlinux, tupu mmemme a arụ ọrụ. Ebe arch ghọrọ ihe ama ama, ihe omimi karịa mmemme bidoro ịgba ọsọ.
N'okpuru otu atụmatụ ahụ, ọ ka mma iji Python, nke na-arụ ọrụ nke ọma na sistemụ arụmọrụ niile yana dabere n'ụdị njikọ ị na-eji, ị nwere ike ịrụ ọrụ ọsọ ọsọ na Java.
Python dị ezigbo mma, mana na njikwa nchekwa data ọ dara, iji mee ka eke na-arụ ọrụ na mysql ị ga-ebudata njikọ nke dị maka ụlọ 32-bit, yabụ na ịchọrọ iji 32-bit eke na 32-bit myslq. Mgbe ahụ ka ọ rụọ ọrụ, ị ga-eme ụfọdụ usoro sara mbara. Ejiri Python rụọ ọrụ na slqlite. Na "ihe nghazi uzo" bu ihe egwuru-egwu, n'ezie o di nnoo nma inweta mmemme desktọọpụ dị mfe na ngwa ngwa, n'ime nkeji iri na pyqt ị nwetara ihe dị mma, agaghị m agba nzọ na eke maka ihe dị mgbagwoju anya ma ọ bụrụ maka ihe dị mfe.
Kedu ihe ị na-ekwu? ihe njikọ eke ahụ maka mysql adịghị mma? kemgbe kedu mgbe ị naghị eji eke? Ebe ọ bụ na pep 249 bịara ìhè http://www.python.org/dev/peps/pep-0249 nke na-achịkwa njikọ DB niile na usoro jikọrọ ọnụ yana usoro atọ yana akara atọ ị nwere DB na-agba ọsọ.
"Nhazi nghazi" egwuregwu? Na Python ihe niile bụ ihe ma ọ bụrụ na ịchọrọ iji nchekwa data gị dị ka ihe ị na-eji MySqlAlchemy nke bụ ORM, ọbụnakwa na ajuju ajuju dị na nchekwa data gị dị ka ihe. A na-etinyekwa nke a na Django na ụdị ya.
N'ikpeazụ, njikọ ahụ (siri ike ịwụnye n'ụzọ) naanị iji dabara-enweta wụnye Python-mysql, ma ị nwere ike ibubata MySQLdb ugbu a, ma mepụta njikọ na cursor.
Tohapụ ikwu na ọ bara uru karịa maka onye mmemme iji soro PyQt ma ọ bụ PySide rụọ ọrụ karịa ịrụ ọrụ na C ++ nke bụ nwa amaala QT, na nchịkọta nchịkọta ị nwere mkparịta ụka nke asụsụ abụọ ahụ na-arụpụta ọrụ. , Achọghị m ikwu banyere nke doro anya ebe a.
Echere m na ị ga-agụtụ tupu ị kwuo okwu wee ghara ịsị na enyi gị nwere (n'oge gara aga) ihe isi ike nbudata njikọ nke arụnyere na ụzọ dị mfe, paman, yum ..
Emebeghị m ha na windo mana agaara m ha na enweghị mgbanwe koodu ọ bụla, naanị ịwụnye ndabere ha dabere na ịwụnye eke, ma ọ bụrụ na ịnweghị ezi n'ihi na ịnọ na windo ị nwere PIP ma ị nwere ike iwunye ya dị ka nke a " Python pip wụnye mysqldba ", olee nnukwu ọdịiche dị na nke dabara.
Ọ bụrụ na ịchọghị iji pip ị nwere ya na ụdị windo, lee ị nwere njikọ abụọ maka 32bit na maka amd64 na executable.exe
ọ dịtụla mgbe ị kenyere ihe egwuregwu iji nweta eke bd myslq na mmeri? Anaghị m ekwu maka linux, ị kwesịrị ịgụ m nke ọma maka na anaghị m akpọ pyside aha ma ọ bụ enyi ọ bụla. Ha
Agbanyeghị ọ bụghị nke m, desktọọpụ. Ebe ị hụrụ ike nke Eke Ọgba dị na Django, dịka ọmụmaatụ.
Agbanyeghi na echere m na nsogbu njikwa nchekwa data akwanyeala ụda na oge ndị a, ewepụla m na ndepụta nke oge ụfọdụ.
Ike nke Eke Ọgba lekwasịrị anya na imeziwanye nrụpụta nke ndị nrụpụta, site na ime ka oge e kenyere maka ọrụ rụọ ọrụ, maka nke a, a na-emeziwanye ogo nke koodu, na-eme ka ọ dịrị ya mfe ijide. Nke a na gburugburu azụmaahịa na-abawanye uru site n'inwe ike itinye ngwaahịa na ahịa n'oge kachasị dị mkpirikpi yana yana ogo kachasị mma, yana opekata mpe ndị mmepe enyere ọrụ ahụ.
Ọ bụ okpu okpu maka azụmaahịa na ndị mmepe na-enweghị isi.
Anaghị m agbagha nke ahụ, mana nsogbu nke arụmọrụ na ihe ma ọ bụ asụsụ ọ bụla ga-abịa.
Python nwere ike dọnye ngwa ngwa Java na oge ọrụ, mana oge ụfọdụ arụpụtaghị ọrụ anaghị akwụ ụgwọ nke ike nke mkpokọta dịka C ++ na-enye dịka ọmụmaatụ.
Nke a bụ otu n'ime nsogbu
N'ezie ọ ga-arụ ọrụ na windo, na kwa mgbe, cheta na na windo ị nwere ike ịgba ọsọ gaa .net nsụgharị 1.0…, site n'afọ nke ọmụmụ Kraịst ahahah.
Na-arụ ọrụ otu ihe ahụ dị ka java (otu koodu ebe ọ bụla)?
Obughi nke oma ma di ka ya, java nwere uzo di omimi.
Eke Ọgba? Dịọkpa, eke nwere wụnye ya na pc na ọ bụ ya. N'ọnọdụ ọ bụla, yana ọba akwụkwọ (dịka Java) na-arụ ọrụ.
N'ezie, naanị ị ga-etinye ya na Windows n'ihi na ọ na-abịa na ndabara na Linux na OsX… ọ bụ ezigbo obe-ikpo okwu.
Echere m na ị na-arịọ C #, tụlee C # na java, atụnyerela eke, ị maara na m mmemme na Python Nano. -.-
Ọfọn anyị nọ n'otu ibe ahụ, ana m etinye Python na ihe niile, ana m ekwu dịka Google "Python mgbe anyị nwere ike yana C ++ mgbe anyị ga-emerịrị."
Qt4. Nke ahụ dị mfe. Mee ka windlerdos na-elo enwe.
Qyoto na-eme ka o kwe omume imepụta ngwa Qt site na iji C #, ma ọ bụ asụsụ NET ọ bụla. Qyoto na-eji anwụrụ, ma na-enye ohere ịnweta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ klaasị Qt niile. Ọ bụ n'efu ma mepee ya na ikike LGPL.
N'etiti Java mastodon na enwe C #, m na-aga maka mastodon.
Enwere ike ịmepụta ngwa site na iji mpempe akwụkwọ windo na Linux na nke a?
Ee mana ...
Na-ele ndị ọbịa anya na nyiwe na-abụghị nke Windows.
Enweghị mkpa ịrụ ụka maka asụsụ mmemme maka nke ahụ bụ uto ma ọ bụrụ na onye ka onye ọzọ mma karịa onye ọ bụla nweere onwe ya ịhọrọ, m na-eme mmemme na Java ma ana m eme nke ọma maka nwayọ nwayọ karịa c ++ n'ihe gbasara oriri nchekwa n'eziokwu. Mana onwe m masịrị m. Echere m na otu dị ka onye mmemme nwere ụkpụrụ ya mana ọ bụrụ na ịchọrọ ịma aka gị ihe kachasị mma bụ ịmara opekata mpe nke ọ bụla na ndị ịchọrọ ma ọ bụ nwee ohere akụ na ụba iji mụta ha kpamkpam ma ọ bụ merie ha ma ọ bụrụ na ị nwere ike . Asụsụ ọ bụla nwere uru na ọghọm dị na ya. Python bụ ezigbo asụsụ mana maka nnukwu ihe, ezughị ezu dị ka asụsụ ndị ọzọ ga. Ya mere, ọ dabere na mkpa gị.
Ahụmịhe ọjọọ na MonoDevelop na KDE, ọ na-adaba na mgbe m na-eche na ọ naghị enye obosara iji ASP.NET rụọ ọrụ na ọkwa dị nfe
(ha hapụ m ka m websaịtị na ASP.NET na mahadum)
Amaghi m ma i jiri qtcurve maka isiokwu a, nihi na ima atu, amam na obu bugara ahuhu.
Ọ bụrụ na m jiri ya na mgbe m malitere, m nwetara ozi na-adọ m aka ná ntị kpọmkwem na, gbanwee qtcurve ka oxygen. Nsogbu ndi gosiputara m nye onwe ha diri na asp
N'ihi ịmata ihe m chọrọ ịwụnye monodevelop na ppa ị biputere na ngwugwu
monodevelop-current na-efu na ya, n’adịghị ka monodevelop-lastest
C # syntax na-akụ C, C ++, na Eke Ọgba.
Enwere m ike nyochaa ya n'onwe m.
Iji Mono Gtk na VALA Gtk.
C # bụ ihe dịkarịrị nso na C mana ghọrọ usoro.
Ejirila m C ++ rụọ ọrụ na syntax ahụ na-adịkarị mgbagwoju anya ma ọ bụrụ na ịnweghị akwụkwọ ntụaka, n'ọtụtụ akụkụ ọ nweghị ihe jikọrọ C na syntax.
C # achọghị faili nkụnye eji isi mee dị ka (C na C ++)
Ọsọ C # na VALA hà ka nke C mgbe ị na-arụ ọrụ.
Na C # ị na-echekwa oge mgbe mmemme ebe ọ bụ na syntax ahụ dị mfe.
Daalụ maka ogbako ahụ, ana m atụ anya isiokwu ọzọ. Enwere m olileanya ịmụ asụsụ mmemme mmemme ozugbo 😀
Ọ bụrụ na Microsoft nwere ike ịme ihe megide Mono, ọ gaara eme ya ugbu a, ị ga-ejide n'aka na nke ahụ. Taa, ị nweghị nsogbu ọ bụla karịa iji Java ma ọ bụ Qt.
Ọ dị ezigbo mma! ma m nwere a na-ajụ, ọ bụghị a ahịa mmebe nwere mara mma dị ka visual studio ma ọ bụ qt imewe?
N'ezie ma ọ bụrụ na xdd, dịka ọmụmaatụ n'otu ide na gtk xd ...
Echichi ahụ abụghị otu ihe itinye ya na nkuzi. Onwere ihe na amaghi m nke oma dika oru nile putara na mbido mana amaghi m, abughi m aka oru asusu a.
Zaghachi Bryan Rodríguez
Lol, kedu ka nrụnye abụghị otu? Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịchọta ngwugwu monodevelop, jiri synaptic, chọọ ya wee pịa ya ugboro abụọ.
Enwere m ike ịwụnye ya mana m ga-pịnye iwu ụfọdụ na ọdụ ahụ mana ị ga-ekele gị nke ukwuu.
.NET na Linux bu nzuzu nke na nani Icaza's hdp biara
Achọrọ m ịma otu esi esi wụnye
N'ikwu eziokwu, ọkwa ahụ sitere na onye ofufe MicroShit.
Obe-ikpo okwu C #? Kedu ihe dị mma nwoke a nwere n'ụbụrụ ya? M na-agwa gị ka ị chịkọta Banshee ma lelee folda gị nke jupụtara .dll faịlụ na di na nwunye nke .exe M na-ahapụ njikọ ahụ http://banshee.fm/.
C # abughi ikpo okwu ma obu oru nke mono na-eme anwansi, ihe o na-eme bu ikwe ka eme ya site na ulo akwukwo ya mgbe o chichara .exe mgbe ahụ ọ bụ oge iji wụnye Mono ruo mgbe ebighị ebi, ma ọ bụghị na ọ nweghị ihe ọ bụla a ga-egbu ọbụna Mgbe m chịkọtara mmemme ahụ, ọ bụrụ na Microsoft ekwughị ihe ọ bụla megide ọrụ Mono ọ bụ n'ihi na o nwere ọmịiko doro anya ma ị hụ ihe mere Xamarin ebe ọ bụ na ụlọ ọrụ ahụ chọrọ ịgbasa maka uru nke ya, ọ bụghị maka abamuru nke ndị sayensị kọmputa.
Njikọ Banshee Archlinux: https://www.archlinux.org/packages/extra/x86_64/banshee/
M na-akpọ onye nwe post ka ọ tụlee ihe ndabere na ọdịnaya nke ngwugwu ahụ.
Achọrọ m Bochum VPS?
Ngwaọrụ Linux kacha mma: Ọktọba 2013